Ubuntu kunye neeprofayili: UDan Rayburn | Iindaba ze-NAB | I-2020 I-NAB bonisa i-Media Partner kunye noMvelisi we-NAB BONISA LIVE. Iindaba zeeNjineli zoSasazo
Ikhaya » Okufumaneka » Ubuntu kunye neeprofayili: UDan Rayburn
Ubuntu kunye neeprofayili: UDan Rayburn
Usasazo luka Beat ngo "2019 NAB Bonisa Iiprofayili zaseNew York ”luluhlu lodliwanondlebe kunye neengcali ezivelele kumzi mveliso wezemveliso abaza kuthatha inxaxheba NAB Bonisa ENew York (Oct. 16-17, 2019).
UDan Rayburn uthathwa njengeyona ngcali kushishino losasazo oluphambili ekusasazeni imithombo yeendaba kunye nevidiyo eku-intanethi. Kutshanje ndiye ndafumana ithuba lodliwanondlebe noRayburn, kwaye amava ayesisifundo sokungqubana kushishino lokusasaza kunye nekamva laso.
Ekuqaleni kodliwanondlebe, uRayburn walungisa ukucinga kwam ukuba uza kuqala ekusasazeni. Ucacisile, "Khange ndivele kumzi-mveliso wosasazo, kodwa kule ndawo yokulungisa iikhompyuter, kwaye ndaqala ngokusasaza itekhnoloji yemithombo yeendaba ngengozi. Emva kokujoyina emkhosini, ndaphuma ndaba yinjineli eqinisekisiweyo yenkqubo yeemveliso zika-Apple. Ndinoxanduva lokuya kwindawo yabathengi kwiindawo ze-NYC ukulungisa izixhobo ezisekwe kwi-Apple ezaziphantsi kwewaranti ngu-Apple. Ngexesha elifanayo, ngo-1995, u-Apple waxhasa umcimbi owawubizwa ngokuba yi-Macintosh New York Music Festival [jonga umfanekiso ongentla], owawusisaziso sam sokuqala multimedia kwiwebhu. Umsitho wawuneklabhu ezimalunga neqela le-NYC edololela umculo ngexesha leentsuku ezininzi kwiwebhu. Kwi-1996, ineemodyuli ze-14.4 ezixhaphakileyo kwaye zisasaza itekhnoloji yeendaba esuka I-RealNetworks-Ngoko iiNethiwekhi eziqhubayo- ziyakwazi ukuvelisa ukusasazwa kweaudio kufutshane ne-real-time, umsitho ukhule waya kufikelela phantse kwishumi elinambini leeklabhu ezinentambo, usasaza ngaphezulu kwamaqela angama-300 kwisithuba seentsuku ezintlanu. Yayiyintshayelelo yam yokuqala ngombono wokuhambisa umxholo wexesha lokwenyani kubasebenzisi bewebhu, kwaye bendicinga ukuba lixesha elizayo lomculo. Ndiyekile ke ukulungisa izixhobo zeApple ndancedisa ekufumaneni inkampani evelisa iindaba ngokusasaza. ”
“Njengalo naliphi na ishishini, iinjongo kunye nemiceli mngeni iyatshintsha ngokuhamba kwexesha, ngokusekwe kubaqhubi beemarike nakwizithintelo. Xa ndaseka i-Live On Line, ividiyo yayingekho, akukho mntu wayenebhendi ebanzi, kwaye kwakungekho mveliso yeshelf kunye neenkonzo ezenza usasazo lwewebhu. Ngokwenene ibubugcisa kunye nesakhono sokukwazi ukusasaza bukhoma kwiwebhu kwaye usike konke kunye. Namhlanje, akukho mntu ucinga kakhulu ngayo njengoko itekhnoloji ilungile, ifikeleleka, kwaye kulula ukuyisebenzisa. Nge-Globix, eyayikwelo xesha lika-1998-2002 xa ividiyo yayiqhuma nyani kwiwebhu, abantu abaninzi baqala ukufumana unxibelelwano lweDSL, kwaye ukusasazwa kwevidiyo kususwe ngokwenene. Kunye KwiMediaMedia.com, eyayiyinkampani yeendaba, ke injongo apho yayikukufundisa imarike. Umceli mngeni kukuhlala uqinisekisa ukuba uyazi ukuba zeziphi iinkonzo ezifunwa lishishini, ukuba bafuna njani ulwazi lwabathengi kwaye loluphi uhlobo lomxholo obaluleke kakhulu kubo.
Okwangoku, kuya kufuneka ndivume ukuba uninzi lwemibuzo elandelayo endiyibuze uRayburn ibimalunga nezinto zokusasaza endandinomdla kuzo. Umzekelo, ndambuza ukuba ukusasaza ekugqibeleni kuya kuthatha indawo yosasazo lwesiqhelo. Uphendule wathi, “Omnye akangenisi omnye, bayancoma omnye nomnye. Zombini iindlela zokuhambisa ividiyo kubasebenzisi ziya kubakho. Imalunga nokusebenzisa itekhnoloji elungileyo ukuhambisa ividiyo elungileyo, kumsebenzisi olungileyo, kwisixhobo esifanelekileyo, ngomgangatho olungileyo wamava. Itekhnoloji enye ayisokuze iphinde ifake enye kwenye. Ithiyori yotshintsho olucetywayo ihlala inomdla kunesisombululo esisetyenziswayo. ”
Ndathuthuzeleka ndakufunda ukuba, nangona ingoyena ntshatsheli ubalaseleyo ekusasazeni imithombo yeendaba, uRayburn akayithengi intsomi yokuba ukusasaza ekugqibeleni kuya kususa imithombo yeendaba emzimbeni phakathi kweaficionados zefilimu yakudala kunye neTV. Ewe, xa ndimbuza ukuba ezi ndlela zimbini ziya kuhlala zikhona, impendulo kaRayburn yayingathandabuzeki. “Ngokuqinisekileyo. Abathengi baneemfuno ezahlukeneyo kunye nezinto abazithandayo ekukhetheni umxholo kunye nendlela abazisebenzisa ngayo. Kweminye, bafuna imithombo yeendaba ebonakalayo kwaye inikezela ngeyona nto ibalaseleyo. Abanye bangakuvuyela ukurhweba umgangatho ukuze ubenzele lula. Kwaye iimodeli zeshishini zahlukile kwisimahla (i-AVOD), ubhaliso (i-SVOD), hlawula irente, uhlawule ngokwakho (ukhuphelo lwedijithali) kunye nemithombo yeendaba ebonakalayo. Akukho sayizi inye ilungele bonke abathengi kwaye ukhetho yinto entle. ”
Ndaye ndabuza uRayburn ukuba ubona naziphi na iinkampani ezintsha ezinika ezona ziqonga zisasaza kakhulu, njengeNetflix, iNkulumbuso yeAmazon, kunye neHulu, naluphi na ukhuphiswano olunzima kwixa elizayo. “Xa usithi 'ukhuphiswano,' iinkonzo ezininzi azikhuphisani. Ezinye zisasaza bukhoma, ezinye zifunwa nje, kwaye ezinye zombini. Ezinye zigxile kumxholo wosapho, ezinye kwimvelaphi kwaye ezinye zijolise kwimidlalo. Kodwa abo kufuneka bajonge ngokuqinisekileyo ziDisney +, Apple TV +, NBC, HBO Max, kunye noQuibi. Bonke baneepokotho ezinzulu, iidola ezinkulu abanokuzisebenzisa kunye neendlela ezininzi zokuphucula iinkonzo zabo. ”
Ukuthetha ngokuthembisa abantu abatsha kwishishini lokusasaza, ndibuze uRayburn ukuba ucinga ntoni ngamathuba okuphumelela kweenkonzo zosasazo ezizayo ezenziwa yiDisney kunye neWarner Brothers, kwaye ukuba iWarner Brothers inokukuthintela ukusilela kwenkonzo yabo yeWarners Instant Archives. "Ayikuko ukuthelekisa okufanelekileyo phakathi kweenkonzo," undixelele. "Inkonzo yoLondolozo lweeNkcukacha zaNgoku nje yayiyindibaniselwano yemiboniso bhanyabhanya, iinkqubo zeTV, kunye nemiboniso bhanyabhanya eyenzelwe iTV ithathwe kwithala leencwadi iWarner Brothers. Yayingenguye umxholo omtsha abathengi ababewukhangela, kwaye wawufumaneka kuphela kwiRoku nakwizikhangeli. I-Warner ngoku yeyakho i-AT & T kwaye inkonzo entsha ebizwa ngokuba yi-HBO Max iya kubandakanya iiyure ezingama-10,000 zomxholo wepremiyamu. Kungenxa yokuphehlelelwa ngentwasahlobo yowama-2020, kwaye asikayazi amaxabiso okwangoku, kodwa inkonzo, exhaswa yi-AT & T ngomxholo we-HBO, iza kuba nomxholo abathengi abafuna ukuwubukela. ”
Nguluphi uhlobo olwalusisiko e NAB Bonisa kwaye NAB Bonisa ENew York, uRayburn uzakubonisa "Ingqungquthela yokuSasaza" kwiintsuku zombini zomnyhadala ozayo ka-Okthobha. "Ndiqale ubambiswano lwam ne-NAB ndenza iiNgqungquthela ezitsha zokuSasaza kwimiboniso yabo eLas Vegas naseNew York City e2018. Umboniso ubeka izithethi ezili-100 ngaphezulu kweentsuku ezimbini ezinamathrekhi amabini kwaye zinolungelelwaniso olukhulu lwezithethi kunye nabasasazi abanjenge-CBS, iAmazon. , Hulu, NBC, I-WarnerMedia / HBO, i-Sling TV, i-FOX Sports, i-Disney, i-NFL njl. Umsebenzi wam kukuvelisa umxholo omkhulu ukunceda ukufundisa, ukwazisa kunye nokuxhobisa abasasazi, abapapashi, amaqonga e-OTT, abathengisi kunye nabanye kwiimodeli zokwenza imali kunye netekhnoloji ye-OTT.
Ingeniso ye-OTT yehlabathi iyakufikelela kwi-129 yezigidigidi zeedola ngo-2023. Nokuba kungokuthengisa (i-AVOD), ukuthengiselana (i-TVOD), okanye imirhumo (i-SVOD), ukukhetha ilungelo lokwenza imali kunye nokufunda ukuba ungayisebenzisa njani ngempumelelo kwizixhobo ezininzi, eziqhutywa ziwebhu. Inkqubo yendalo iyingxaki. Umboniso ufundisa abo bazimeleyo ukuba benze njani imali ngokuthe ngqo kubathengi (i-DTC) kwaye uve ukuba ezinye zeenkampani ezinkulu ehlabathini zenza njani ilayibrari yevidiyo kunye nokwakha ubudlelwane bebhrendi kunye nabathengi babo. Kwangelo xesha, abathengi balindele owona mgangatho wevidiyo ubalaseleyo kwizixhobo zabo nakumabonwakude naphina, nangaliphi na ixesha. Amaqonga e-OTT kunye nabasasazi baqhubeka nokuba nomceli mngeni kwaye bayaqhubeka nokuphucula ukuhamba kwabo kwevidiyo ukunika abaphulaphuli babo elona xesha libalaseleyo lokujonga. Ke sigubungela yonke into abayifunayo malunga nomxholo wokupakisha, ukuhanjiswa kweekhowudi, ulawulo lweendaba, ukudlala kwakhona, njl., Konke oku kuvela kwiingcali eziphambili kumzi mveliso. ”
Ndilugqibe udliwanondlebe lwam noRayburn ngokumbuza ukuba zithini na izicwangciso zakhe ngekamva. Impendulo yakhe ityhila ububele bakhe. “Umsebenzi wam kukwabelana ngolwazi, nokuba kubhlog yam, buqu kwimiboniso, namalungu eendaba, kumabonakude esenza udliwanondlebe, njl., Ke ndisoloko ndizama ukwazi amathuba awela umendo wam avumela ukuba ndiyenze ngendlela engcono. Kungenxa yoko le nto ndidwelisa inombolo yam yeselfowuni kwiphepha lasekhaya lebhlog yam (917-523-4562), kwaye ndiphendula zonke iifowuni. Awusoze wazi ukuba uzakuthetha nabani, ngawaphi amathuba azivelelayo, okanye iindlela onokuthi ukwazi ukunceda ngazo abanye, nto leyo ethi incede ishishini liphela likhule. ”
2016 NAB Bonisa I-2016 NAB Bonisa i-Job Fair 2016 NAB Bonisa iindaba Izabelo zoBasazo Umagazini we-Broadcast Beat KwiNkomfa yabasasazo KwiNkomfa yoSasazo NAB 2015 NAB 2016 NAB Bonisa NAB Bonisa i-2016 imisebenzi yokubonisa NAB Bonisa i Las Vegas NAB Bonisa Ukubhaliswa NAB16 nabshow Umbutho kaZwelonke woLwazi lwabasasazo Yelizwe loPhuhliso sprockit Injini yeVidiyo 2019-10-04
Previous: Ukusasazwa kwePix yokusasaza ukhetha iMedialooks MFormats kunye neWebRTC ukunika amandla isisombululo sayo esilandelayo
next: Umfoti kunye noMhleli weVidiyo